Onye ọka iwu Cannabis DUI | Onye ọka iwu Cannabis na Peoria Illinois
Onye ọka iwu Cannabis DUI na Illinois
Criminal Cannabis DUI ọka iwu ọka iwu Na Illinois
Enweela ọtụtụ iwu agafe, nke na-akwado iwu iji cannabis. Agbanyeghị, nke a apụtaghị na ịnwere ike iji ngwaahịa a gaa gburugburu. Dịka ọmụmaatụ, na Illinois, eji iwu ọgwụ cannabis eme iwu na 2015, yana iji ndị okenye na 2020. Kemgbe ahụ, ọtụtụ ụlọ ahịa anọwo na-ere ngwaahịa cannabis karịa na counter ka ndị na-ahụ maka kaadị wii wii ike.
Agbanyeghị, iji cannabis maka ebumnuche ụfọdụ ka bụ iwu na Illinois. - Ọbụna Mgbe LEGALIZATON!
Ọ bụrụ na achọtara gị n'ụzọ iwu na-ezighi ezi, ịkwesịrị ịhazi ihe nchebe kachasị mma iji zere ije oge mkpọrọ maka DnabI cannabis. Ọ bụrụ na ị bụ onye bi nke Illinois, ị nwere ike ịtụkwasị obi na nka anyị ma a bịa na ịgba akwụkwọ ịgba akwụkwọ cannabis. Anyị enyerela ndị ahịa dị iche iche aka idozi okwu metụtara ojiji na ire nke mkpụrụ osisi cannabis. Ọ bụ ezie na ị nwere ike iji mkpụrụ osisi maka ezigbo ebumnuche, anya nke iwu nwere ike ịkọwa omume gị n'ụzọ adịghị mma. Ya mere, otu esi agbagha okwu gị na-arụ ọrụ dị mkpa na ikpebi mkpebi ụlọikpe.
Jụọ Ajụjụ Cannabis Gị
Ihe kpatara I ji akpọkwa ọka iwu mkpesa mkpesa nke Cannabis na Peoria, Illinois.
Ọ bụrụ na ị bụ onye bi na Illinois, ị nwere ike ịtụkwasị obi na nka anyị ma a bịa onye omekome DUI ịgba akwụkwọ cannabis. Anyị enyerela ọtụtụ ndị ahịa aka idozi okwu metụtara ojiji na ire nke cannabis.
1. Onye ọka iwu ga - enyere gị aka ịghọta ikike gị n'oge usoro a
Mkpebi dabere na iji ihe na-akpata esemokwu nwere ike ịnwe ihe mgbagwoju anya. Agbanyeghị na inwere ikike na inwere onwe gị n’oge a na-anụrụ ihe, a ga-anapụ ụfọdụ ikike na nnwere onwe ma ọ bụrụ na ịnweghị nnọchite anya ya. Mgbe ị ga-etinye aka n’iwu n’iwu ọka iwu. ị na-amụba ohere ị ga-enweta nsonaazụ ka mma.
2. Iji Nyere Gị Aka endgbachitere Iwu nke Omume Gị
Ọ bụrụ na ị na-eji cannabis maka ebumnuche ọgwụ, ị ga-achọ onye ọka iwu iji nyere gị aka igosipụta omume gị. Ga n'ụlọ ikpe na-enweghị ọka iwu nwere ike ibute nsogbu gị, ị nwere ike ị nweta gị ebubo na-ezighi ezi. Ya mere dụrụ gị ọdụ ka ị nweta onye ọka iwu mara ikpe onye ghọtara iwu gbasara iji ụdị ọgwụ ndị a, iji wee kọwapụta okwu gị.
3. Iji Nwee Mbelata Ntaramahụhụ na Iwu
Ọ bụrụ na ịchọghị ịga agha ogologo oge maka ụlọ ikpe ebubo cannabis ebubo mpụ, ndị ọka iwu anyị a zụrụ nke ọma ga-enyere gị aka idozi nsogbu ahụ n'ụlọ ikpe. Site na mkparịta ụka na-arịọ arịrịọ, ọtụtụ ndị na-agbachitere na-enwe ike ịchọta ụzọ maka nsogbu dị mgbagwoju anya na ọtụtụ oge nga. Can nwere ike ịchekwaa gị ma ọ bụ azụmaahịa gị puku kwuru puku dọla naanị site na ịzere usoro ikpe ogologo na nke ruru unyi nke nwere ike ibute ikpe amabeghị.
Kedu ihe mere ịhọrọ Onye oka iwu ịgba akwụkwọ Cannabis na Peoria, Illinois.
Onye isi ọka iwu anyị, Thomas Howard bụ onye ọka iwu tụkwasịrị obi nke nwere ahụmịhe dị ukwuu n'okwu ikpe cannabis. O nyekwaara ọtụtụ narị ndị ahịa, ma ndị mmadụ n'otu n'otu na azụmaahịa, ịnweta ikpe ziri ezi na ntaramahụhụ belata na ịgba akwụkwọ cannabis ndị omempụ. Ọ bụrụ n’ị bi na Peoria Illinois ma ị ga-achọ idozi okwu metụtara ị ofụ igbo, echegbula onwe gị.